नौलो यात्रा २०१०
यात्रा प्राय नोलौ नै हुन्छ। क्यालेन्डरका पानाहरु फेरीने क्रममा क्यालेन्डर नै फेरिने नया बर्षको यात्रा भने दिशा ठम्माउनै मुस्किल पर्ने पनि हुन सक्छ। वास्ता नगरे कागलाइ बेल पाके जस्तै हुन्छ वास्ता गरे नया बर्षमा युग नै जन्माउन सकिन्छ। हामी ब्लगमा प्राय अरुकै कुरा गर्र्छौं। भनौं न अरुको समाचार पढेर रमाइलो गर्छौं, अनि भन्छौं यस्ले यो गर्यो उस्ले उ गर्यो। यो चाहीं राम्रो भयो यो चांही खराब भयो। आफ्नो राम्रो र नराम्रो पक्ष केलाउंदै आफ्ना सुन्दर सपना साकार पार्ने बाटो पछ्छाउन नया बर्ष एउटा राम्रो अबसर हुनसक्छ। हुन त यात्रा छोटै या अनन्त सम्मै होला तर लक्ष सुनौलो लिए यात्रा अती नै छोटो होस या लामो त्यसमा खुब मिठास हुन्छ। भन्छन सफलताको सिमा त आकाश हो। तर सफलता सानै किन नहोस, अथक प्रयासबाट मिलेको त्यो सफलतामा ठुलो खुसी हुन्छ। झन यो होडबाजीको दुनियमा त सफल हुनु पनि एउटा ठुलै बिजय मान्नुपर्दछ। नौलो यात्रा कठिन होस या सरल, जित होस या हार प्रयास भने पक्कै गर्नुहोस र यस नया बर्षमा आफ्न सपनाहरु पछ्चाउंदै नया जिबन कोर्नुहोस।
अन्तमा सुनौलो लक्ष लिइ नया बर्ष २०१० को नौलो यात्रामा निस्कने स्वदेश या बिदेशमा रहेका मित्रहरु प्रती श्पर्स समूहको गित सम्पर्ण गर्न चाहान्छू।
Lekh ra geet dubai le man choyo. Utprerak lekh ko lagi tapai lai muri muri dhanybad. Happy new year 2010.
पक्कै हो, यात्रा त गर्नै पर्छ - सफलता वा असफलताका सबै नतिजालाई थाँती राखेर।
असफल भईएला भनेर यात्रा सुरु नै नगर्नु भन्दा यात्रा गरेर असफलताको पाठ सिक्नु पनि धेरै राम्रो हुन सक्छ ।
नयाँ वर्षमा सबैलाई नयाँ यात्रा थाल्ने प्रेरणा मिलोस !
छोटो मिठो पोस्टको लागि धन्यवाद !
नेपालियन जी छोटो र मिठो तपाइको अनुभव सहितको शाब्दिक शुभकामना लाई भण्डारण गर्दै मैले पनि भन्न चाहन्छु -
सन २०१० सम्पूर्णमा नौलो बिहानी भएर उदाइरहोस अनन्तसम्म !!
साथै दौतरी लगायत यसका समस्त पाठक र शुभचिन्तक हरुमा न्यानो शुभकामना!!
नववर्ष २०१० को अवसरमा सम्पूर्ण ब्लगरमित्रहरुमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु । यो वर्ष तपाईको सफल्ताको वर्ष होस् ।
दौतरी समुह र यस ब्लग भिजिट गर्नु हुनेहरु सबैमा नव बर्ष २०१० को उपलक्ष्यमा सु-स्वास्थ्य , दिर्घायु तथा उतार उतार प्रगतिको कामना गर्दछु | धन्यबाद !!
दौतरी समुह र यस ब्लग भिजिट गर्नु हुनेहरु सबैमा नव बर्ष २०१० को उपलक्ष्यमा शुभकामना।
यो लेखले नया बर्षको रिजोलुसनलाइ घच्घचाइरह्यो। सार्है गार्हो पो रिजोलुसन धान्न!
अनि सार्है राम्रो गित। जती सुने पनि सुनीरहुं जस्तो लाग्ने। गितको लागी धन्यबाद।